Saxafi Loo Xiray Akhrin La'aanta Wareegto Madaxweyne - Wararka Maanta:...
Saxafi loo xiray Akhrin La’aanta Wareegto Madaxweyne – Wararka Maanta:…
Weriyaha xiran oo lagu magacaabo Alferd Angasi Dominic kana mid ah War Alhriyayaasha Warbaahinta Qaranka Koonfurta Sudan ayaa waxa uu u xiran yahay Hay’adda Nabadsugida Qaranka ee Koonfurta Suudaan ee loo soo gaabiyo NSS.
Mid ka mid ah Suxufiyiinta Warbaahintaasi oo magaciisa qariyey ayaa sheegay in Alferd Angasi Dominic la xiray, kadib, markii uu Weriyaha xiran fasax qaatay hal maalin ka hor Maalintii uu War Akhrinta uu lahaa, iyadoo ay Xaaskiisa xanuunsanayd.
Wararka Maanta : Ciraaq oo soo riday Drone iyo qasaare ka dhashay - Wararka Maanta:...
Balse, qaar ka mid ah Weriyayaasha ayaa u turjumay maqnaanshihiisa inuu diidanaa inuu akhriyo Wareegto Madaxweyne Silva Kiir ka soo saaray Dib-u-dhiska Gole Ku-meel-gaar ee Dowlad-gobaleed.
Xubno la socday Hay’adda NSS ayaana la sheegay inay Saxafiga ka kaxeysteen goobtiisa shaqada, isagoo ilaa haatana ku xiran Xabsiga Hay’addaasi.
Waxaa socda dadaal lagu doonayo in lagu sii daayo Saxafiga ku eedeysan inuu shaqada uga baaqday, si uusan u akhrinin Wareegto Madaxweyne.
Mas’uuliyiin ka socotay Hay’adda Warbaahinta Qaranka dalka Koonfurta Suudaan ee SSBC iyo Saraakiil ka tirsan NSS-ta ayaa bishan July 15-dii Kulan ka yeeshay Qaddiyada Saxafiga xiran.
Wararka Maanta : Diyaarad Sidday 90 Ruux oo Ku Burtburtay Filibiin
Labada dhinac ayaa la sheegay inay isla qaateen in Saxafiga la sii daayo, balse, weli waxa uu dhex yururaa Xabsiga.
Saraakiisha NSS-ta waxay sheegeen in la sugayo Sarkaalkii bixiyey Amarka lagu xiray War-Akhriye Alferd Angasi Dominic.
Sarkaalka ayaa la sheegay inuu fasax ku maqan yahay, mana kala cadda Xilliga uu shaqada ku soo laabanayo.
Nidaamka Hay’adda NSS-ta dalkaasi u degaan ayaa ah inaan qofka la sii Dayn Karin ilaa uu Sarkaalkii soo xiray uu bixiyo Amarka Eedeysanaba lagu sii dayn doono.
Wararka Maanta : Tirada dadka daadadka ku dhintay ee Yurub oo kordhay - Wararka Maanta:...
Uhuru Kenyatta oo jeediyay hadal lagu tilmaamay inuu ka dhan yahay…
28 qof oo lagu tuhmayo inay taageeri jireen maleeshiyaadka Kooxda TPLT ayaa lagu xir xiray Magaalada jigjiga ee Xarunta Dowlad degaanka Soomaalida Itoobiya.
Ciidamada Booliska degaanka ayaa dadkaasi xirxiray, kuwaas oo looga shakiyay inay taageerayeen Kooxda TPLF oo dagaalka kula jirta Ciidamada Federaalka Itoobiya.
Komishineerka booliska deegaanka soomalida Maxamed Yare ayaa Warbaahinta u sheegay xariga dadkaasi, waxaana uu sidoo kale sheegay in gacanta lagu dhigay hantidii ay lahaayeen oo la tuhunsanyahay inay ku maal galinayeen TPLF ama ay horayba uga dhaceen shacabka deegaanka xiligii taliskii TPLF.
Wararka Maanta : Dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ka hadashay iney ciidamo u dirayaan...
Dowladda Federaalka Itoobiya ayaa waxaa ay dagaal adag kula jirtaa Kooxda TPLF eek u sugan Gobolka tigreega ee Waqooyiga Itoobiya, waxaabna dagaalka qeyb ka ah Ciidamada dowlad deganka Soomaalida oo dhawaan ku biiray.
Wararka Maanta : Deg Deg: RW Rooble oo Cashir udhigay Mahdi & C/Xaashi, Deni oo Xildhibaano...
Waxaa Maanta Magaalada Muqdisho soo gaaray oo siweyn loogu soo dhaweeyay Wafdi uu hoggaminayo Wasiirka Wasaaradda Difaaca iyo Arimaha Dibadda Airland Simon Coveney iyo Xubno kale oo la Socday..
Wafdiga waxaa Garoonka diyaaradaha Aadan-Cadde ee magaaada muqdisho kusoo dhaweeyay Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji oo uu Wehliyo Wasiirka Arimaha Dibadda Maxamed Cabdirisaaq.
Intaasi kadib Wafdiga ka socda dowladda Airland ayaa waxaa ay kulan gaar ah la yeesheen Wasiirada Gaashaandhigga & Arrimaha dibadda Soomaaliya, iyaga oo ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal & taageero dhinaca Amniga ah oo la siiyo Soomaaliya.
Wararka Maanta : Wada-hadallo u socda Dowladda Afghanistan iyo Taliban - Wararka Maanta:...
Sidoo kale Wafdiga ka socday dowladda Airland ayaa uga mahad celiyay wasiirada Dowladda Soomaaliya sida ay u soo dhaweeyeen, iyaga oo balan qaaday in ay dowladda Soomaaliya ka garab istaagi doonaan taageero dhinaca Amniga ah.
Wafdiga uu hoggaminayo Wasiirka Wasaaradda Difaaca iyo Arimaha Dibadda Airland Simon Coveney ayaa inta uu ku sugan yahay Magaalada Muqdisho waxaa uu kulamo kala duwan la qaadan doonaa mas’uuliyiin sar sare oo ka tirsan dowladda Federalka Soomaaliya.
Wararka Maanta : Somaliland oo sharci yaab leh ka soo saareysa calanka Soomaaliya - Caa...
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa carabka ku adkeeyay sida ay dalkiisa uga go’an tahay in xuduudihiisa uu uga difaaco shisheeye kasta oo soo faro-galiya.
Hadalkan oo uu jeediyay mar uu booqanayay keynta Boni ee ku taaalla deegaanka Lamu una dhaw xuduudda Kenya iyo Soomaaliya ayaa waxa uu ku nuux-nuuxsaday in dalkiisa uusan marnaba aqbali doonin cid kasta oo sheegata qeyb ka mid ah dhulkiisa.
Wararka Maanta : Abiy Axmed oo sheegay in hub farabadan ka furteen Kooxda TPLF - Radio...
Nin ku safrayey Aqoonsiga Xaaskiisa oo la qabtay – Wararka Maanta:…
Booliska dalka Indonesia waxay gacanta ku dhigeen Nin iska dhigayey Haweeney oo ku safrayey Dukumentiyada Aqoonsiga Xaaskiisa iyo Caddeynteeda Baaritaanka inaan iyada laga helin COVID 19.
Ninkaasi oo magaciisa loo soo gaabiyey DW oo horey looga helay COVID-19 waxa uu raacay Diyaaradda Shirkada Citilink ee qiimo jaban oo isaga kala gooshaysay caasimada dalkaasi ee Jakarta iyo magaalladda Ternate oo ku taalla W/Bari ee dalkaasi.
Ninkaasi oo Niqaabka ku qariyey jirkiisa ilaa lugihiisa ayey u suurto-gashay inuu Diyaaradda raaco, iyadoo aan laga shakanin Muuqiisa iyo Aqoonsiga uu ku dhoofayey.
Balse, xaallada waxay kashifantay, xilli ay Diyaaradda Hawada ku jirtay, kadib, markii mid ka mid ah Shaqaalaha Diyaaradda uu arkay Ninkii ku labisnaa Labiska Dumarka oo sii galaya Suuliga Diyaarada, kadibna soo baxay isagoo soo xiray dharka u gaarka ah Ragga.
Ninkii Shaqaalaha waxa uu arrinkii ku wargeliyey Duuliyihii, kadibna waxay la sii wadaageen Madaxda Ammaanka ee Garoonka magaalladda Ternate.
Markii ay Diyaaradii caga-dhigatay Garoonka waxay Saraakiisha Garoonka gacanta ku dhigeen Ninkii ku safrayey Dukumentiyadii Xaaskiisa, waxayna ku Karantiileen gurigiisa.
Wararka waxay sheegayaan in Ninkaasi loo gudbin doono Maxkamadda marka uu dhamaysto Karantiilka, Donna looga baaro COVID-19.
Maxaa kusoo kordhay xiisadda dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadka? – Radio…
Wararka Maanta : Xulka Qaranka Taliyaaniga oo 53 sano kadib ku guuleystay koobka Yurub ee...
Wararka Maanta : Guddoomiyahii degmada Buula burte oo xilka qaadis lagu sameeyay iyo mid...